Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal ka bilowday degmada Tselmt ee waqooyi Gondar oo hareereysan
Dagaal ka bilowday degmada Tselmt ee waqooyi Gondar oo hareereysan
Ciidamada Itobiya ayaa hareereeyay degmada Tselmt oo ka tirsan Gondar ka dib markii iska horimaad ba’an oo markii dambe isku rogay dagaal uu ku dhex maray dadkii daganaa magaalada iyo sirdoonka TPLF-ta. Dad uga soo waramay xaaladda shabakadda Ethiopian Review waxay u sheegeen ugu yaraan 3ex ka mid ahaa ciidanka Wayaanaha la dilay oo dad badan oo shacab ah oo aan la haynin tiradooda lagu dhaawacay ay ka mid yihiin qaar wadaadada diinta masiixiga ah.
Arinta iska horimaadka ah ayaa ka dhalatay ka dib markii uu maamulka Wayaanaha qorsheeyeen inay ka dhisaan warshad sonkorta ah meel aan ka fogayn Kaniisada taariikhiga ah ee Waldeba.
Wadaadada ayaa waxay ku doodayaan in warshadan iyo biya-xidheenka laga dhisayo meesha ay baabi’in doonaan kaniisada iyo meelahaa taariikhiga ah.
Waxay shabakadda intaa raacisay in teleefanadii laga jaray Gondar oo aanay ogayn xaaladda meesha ay mareyso hadda.
Wararka kalee ay qortay shabakadda waxaa ka mid ah in magaalada Metemma oo xadka Sudan ku taala ay jabhadda lagu magacaabo -Ethiopian Unity and Freedom Force (EUFF)- ay dab qabadsiiyeen 60 guri oo siday sheegeen ay lahaayeen xisbiga talada dalkaa haysta ee TPLF.
Meela badan oo ka mid ah dalka Itobiya ayaa aad u kacsan, iyadoo ay jireen maalmihii la soo dhaafay kacdoon iyo banaanbaxyo ay wadeen dadka muslimiinta ah oo diidan faragalinta qaawan ee gumayste-yaasha TPLF-tu ay ku hayaan arimaha quseeya diinta islaamka. Dad shacab ah oo gaaraya ugu yaraan 5 qof ayay ciidamada Itobiya ku toogteen degmada Arsi oo ka tirsan Oromiya ka dib markay isku dayeen inay xoog ku soo furtaan imaamkii masjidka magaalada oo xabsiga ay dhigeen isagoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo banaabxyo ka dhacay magaalada oo lagu diidanaa madhabada Axbaashta.
Waxaa hadda aad u soo kordhaya dareenka ah ay xukuumadda Wayaanaha ka qabto inay dhalinyarada masiixiyiinta ku biiri doonaan kacdoonka ka socda Adisababa gaar ahaan ay ka qayb qaadan doonaan banaan-baxyada ay wadaan muslimiinta.
Halkan ka dhagayso VOA-Amxaari oo ka waramaysa arintaa.